IMarvel iqinisekisa ukuthi kufanele ubuke imibukiso ye-Disney + ukuze ulandele i-MCU - BGR - Tamban RELAY
Accueil » UKUZIJABULISA IMarvel iqinisekisa ukuthi kufanele ubuke imibukiso ye-Disney + ukulandela i-MCU - BGR
Lapho abakwaDisney beveza ukuthi iMarvel Studios izokhipha imibukiso emisha yeDisney + nokuthi lokhu kuzoveza abalingiswa abaningi (nabalingisi) esikhonjiswe kumidlalo yeshashalazi, kwabonakala sengathi abalandeli beMarvel bazodinga uku ukubhaliswa kwe-Disney ukunikeza injongo yomhlaba weMarvel Cinematic. Enkulumweni ne Bloomberg kuleli sonto Umphathi weMarvel uKevin Feige ukuqinisekisile lokhu. kodwa besingazi ukuthi ibaluleke kangakanani endabeni yomhlaba wonke ezokwakhiwa yiMarvel Studios eminyakeni ezayo. Ngokusho kukaFeyige, uma ufuna ukuhlala ku-loop, ukubukela imibukiso ye-Disney + cishe ngeke kube inketho.
Nasi isicaphuni esiphelele esiqeshini sika Bloomberg kufaka phakathi isilinganiso esiqondile kusuka ku-Feige ekugcineni:
[U-Feige] uyenqaba ukuxoxa ngesabelomali sohlelo - kufaka nemibiko - yokuthi iDisney isebenzisa imali efinyelela ezigidini ezingama-25 esiqeshini esithile kweminye imibukiso yeMarvel, okungaphezu kwe-HBO obekungasetshenziswa kuyo kumdlalo wokugcina wama-Thrones wesizini. Uwisa ucezu oluncane, noma kunjalo. Uma ufuna ukuqonda yonke into kuma-movie we-Marvel esizayo, uzodinga ukubhaliswa kwe-Disney +, njengoba imicimbi entsha yombukiso izofakwa kumamuvi wakusasa anjenge UDokotela Strange ku-Various of Madness . IScarlet Witch izoba ngumlingisi ophambili kule movie, futhi uFeyige uveza ukuthi uchungechunge lweLoki nalo luzoxhunyaniswa. "Angiqiniseki ukuthi bake samazi ngaphambili," kusho yena. "Kodwa kunjalo."
Besivele sazi ukuthi Scarlet Witch uzoba neqhaza okufanele alibambe ngokulandelana kweDokotela Strange, kepha kungokokuqala ukuthi uMarvel aqinisekise ukuthi izehlakalo ze- WandaVision ku-Disney + kuzolungisa indaba ye Izinhlobonhlobo Zokuhlanya . Ngaphezu kwalokho, lesi isikhathi sokuqala esizwa ngalo mbukiso Loki kwi-MCU enkulu, yize singazi ukuthi izehlakalo zochungechunge lukaTom Hiddleston luzoluthinta kanjani uhambo lukaDkt Strange.
Ngeshwa, kuzothatha isikhathi ngaphambi kokuba sazi kabanzi ngobudlelwano phakathi kwawo wonke la maprojekthi, njengokuthi WandaVision et Loki konke sekuzoqala kwi-Disney + ekuqaleni kwe-2021, ngenkathi Udokotela Strange in ahlukahlukene ubuhlanya izokhishwa egumbini kuphela i-21 Meyi yonyaka ofanayo.
Umthombo Wezithombe: Amarvel Enterprise / Kobal / Shutterstock
Ngabe i-Disney + ifika nini ngempela ku-inthanethi? - I-BGR
Amaqembu e-16 afaka uchungechunge lwe-Euro 2020; ukudweba ukuze ulolonge imidlalo